Warbaahinta Sweden oo Shaacisay Qofka lagu tuhmayo Weerar Faas loo adeegsaday oo 7 Qof ku dhaawacantey Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka Maanta SomaliskaWarbaahinta Sweden oo Shaacisay Qofka lagu tuhmayo Weerar Faas loo adeegsaday oo 7 Qof ku dhaawacantey
March 5, 2021 Wararka Maanta Somaliska, Wararka Sweden 0
Photo Mikael Fritzon / Wakaaladda Wararka TT
Sadex qof ayaa nolol halis ah ku jira kadib markii nin uu faas wata uu ku weeraray Vetlanda iyadoo tirada guud ee dhaawacentay ay mareyso 7 qof. Sida uu qoray wargayska Expressen ninkani waa 22 jir ka soo jeeda dalka Afghanistan.
Eedeysanaha ayaa Sweden yimid 2018 waxaana horey loogu xukumay kiisaska daroogada iyo isticmaalka xashiishka sida lagu sheegay warbixin uu qoray wargeyska Sweden.
Hogaamiyaha booliiska degmada Höglandet ayaa shir jaraa’id oo uu qabtay Arbacadii ku yiri “ninkaan booliska horey ayey u yaqaaneen dembiyada yar yar”. Booliska ayaa Arbacadii baaray guriga ninkan.
Wadar ahaan toddobo qof ayaa ku dhaawacmay weerarka oo ka dhacay agagaarka xarunta tareenka ee Vetlanda galabnimadii Arbacada. Ninka falka geystay waxaa toogtay booliska waxaana loo qaaday isbitaalka. Isagu ma aha mid naftiisa khatar ku ah.
Booliska ayaa xiray shan goobood oo dambiyo kala duwan ka dhaceen. Kiiska ayaa hada loo baarayaa inuu yahay isku day dil, laakiin booliisku ma diidayo inay noqon karto weerar argagixiso.
“Waxaa jira faahfaahin ku saabsan baaritaanka oo naga dhigaya inaan baarayno ujeedooyin kasta oo argagixiso,” ayuu yiri taliyaha booliiska gobolka Malena Grann oo shir jaraa’id qabtay habeenkii Arbacada.
Inta badan duruufaha ku xeeran weerarka iyo sida ay wax u socdaan wali lama oga.